Dogs of the Dow - Durig ၏အချိန်ကာလ ကျော်လွန်၍ တိုးတက်မှုများ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
Durig ၏ Dog of the Dow သည်စတင်တည်ထောင်ချိန် မှစ၍ Dow Jones နှင့် S7P 500 ထက်သာလွန်ခဲ့သည်
Dog of the Dow - အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ Durig ၏အဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 14, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, အဆိုပါ Dow 2020 ၏ခွေး, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, အသားပေးသတင်းများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ, သတင်းဆောင်းပါး
12.41% တစ်နှစ်-to-date ရက်စွဲ
12.87% 1 တစ်နှစ်တာပြန်လာမှုလမ်းကြောင်း
ဒီအပတ်, Durig Capital ကို ၎င်း၏၏မကြာသေးမီကစွမ်းဆောင်ရည်ပြန်ပြောပြ Dow မဟာဗျူဟာ၏ Dogs ၏ထူးခြားသောဗားရှင်းပိုင်ဆိုင်သည် နှင့်၎င်း၏အရင်းနှီးဆုံးရွယ်တူ၏ရန်စံ။ ထို့အပြင်စူးစမ်းလေ့လာမှုသည်အစုရှယ်ယာစျေးကွက်နှင့်ဆက်စပ်မှုအစုစုဆက်စပ်မှု၏အရေးပါမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစျေးကွက်အခြေအနေများအောက်တွင်သီအိုရီအရမည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းအကြံဥာဏ်ပေးရန်မည်သို့ကူညီနိုင်သည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။
Durig ၏ Dow ၏ Dogs - ဇူလိုင်လစွမ်းဆောင်ရည်အထူး
0.72 ၏ Beta ကို (vs. Benchmark *)
(အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောစွမ်းဆောင်ရည်သည် ၇-၃၁-၁၉ အထိဖြစ်သည်)
Durig's Dow Portfolio ၏ခွေးများသည်သမိုင်းကြောင်းအရ၎င်းသည်ကျန်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကွဲလွဲနေသည်။ အမြဲတမ်းအစီရင်ခံတင်ပြချက်များသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကအစုရှယ်ယာ၏နှစ်စဉ်အမြတ်အစွန်းသည် ၁၅.၉၈% ရှိရာအနီးဆုံးသက်တူရွယ်တူချင်းများထက်သာလွန်သည်။ (SPDR Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ETF၊ S&P 500 Idx TR, Arrow Dow Jones ဂလိုဘယ်ထွက်နှုန်း ETF) စဉ်းစားအတူတူပြန်လာကာလအတွင်းအနည်းဆုံး 2.5% ဖြင့်။
Durig's Dow Portfolio ၏တစ်နှစ်တာပြန်အမ်းငွေသည် ၁၂.၈၇% ဖြင့်ရောက်ရှိလာပြီးအတော်လေးအထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ ၎င်း၏အနီးဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်သော S&P 12.87 Idx TR ၏တစ်နှစ်ပြန်အမ်း ၇.၉၉% ကိုသိသိသာသာကျော်လွန်နေသည်။
၏အလငျး၌ Q4 2018 ၏မကြာသေးမီကစျေးကွက်ကျဆင်းမှု Durig ၏အစုစု၏အကျိုးအမြတ်သည်စျေးကွက်ဖိအားပေးမှုအောက်တွင်အလွန်ဒဏ်ခံနိုင်သော်လည်းပုံသေစျေးကွက်တည်ငြိမ်မှုကိုလျော့ကျစေသည့်စျေးကွက်နှင့်အစုရှယ်ယာ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုသည်စျေးကွက်အခြေအနေနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်စပ်နေခြင်းနှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်အလုံးစုံသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ S&P 500 အနေဖြင့်စျေးကွက်၏လှုပ်ရှားမှုများကိုကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီး beta 1.0 ကိုထိန်းသိမ်းသည်။
Dow of Dow of Dogs နှင့်တရားဝင် Dogs of Dow
အဆိုပါ အဆိုပါ Dow ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ၏တရားဝင် Dogs ကို ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည် မိုက်ကယ်ခ O'Higgins “ Dating the Dow” စာအုပ်ပါ။ အခုတော့ Durig ရဲ့ထူးခြားတဲ့ အဆိုပါ Dow အစုစု၏ခွေးများ Dow ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ၏တရားဝင် Dogs ၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တိုးတက်မှုသည် Dow ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ၏တရားဝင်ခွေးများမှရရှိသော ၁၁.၈% YTD ထက် ကျော်လွန်၍ ၀.၆၁% အမြတ်ပြန်ရရှိခဲ့သည်။ (အောက်).
ယင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကြောင့် Durig ၏အစုရှယ်ယာများတွင်အမြင့်ဆုံးအမြတ်အစွန်းအထွက်နှုန်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖမ်းယူနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည့်ထိပ်တန်း Dogs များ၏မဟာဗျူဟာတွက်ချက်မှုနှင့်အတူတွဲဖက်လုပ်ဆောင်နေသည့် Durig ၏အစုရှယ်ယာများတွင်ထိပ်တန်းရာထူးများတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ (DJIA)။ တ ဦး တည်းသာရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ထိတွေ့မှုကင်းမဲ့နေသည်ဆိုပါက Dow Portfolio ၏ Dogs များထည့်သွင်းခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တိုးပွားလာနိုင်သည် အစုစုကိုအမျိုးမျိုး.
Durig ၏ Dow Portfolio ၏ခွေးများသည်စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုကိုသိသိသာသာဖြစ်ပေါ်စေသည့်အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်4၏ Q2018 (ညာ) , တစ်ခုလုံးအဖြစ်စျေးကွက်နှင့်၎င်း၏အလွန်နိမ့်အပြုသဘောဆက်စပ်မှုဖြစ်ပါတယ် (vs. S&P 500 TR Idx vs. ) ။ တက်စျေးကွက်များတွင်၏သမိုင်းပြန် Durig ရဲ့ Dow Portfolio ၏ Dogs ကို စျေးကွက်ကျဆင်းနေသောစျေးကွက်များတွင်အစုစု၏သမိုင်းဝင်အမြတ်သည်ရွယ်တူချင်းများထက်ကျဆင်းမှုနှေးကွေးနေသည်။
အစုရှယ်ယာစျေးကွက်၏အတက်အကျတွင်ပါ ၀ င်ရန်ရည်မှန်းထားသော်လည်းသိသာသောကျဆင်းမှုများနှင့်ထိတွေ့မှုကိုကန့်သတ်လိုသူများအတွက်၊ Durig ရဲ့ Dow Portfolio ၏ Dogs ကို အလားအလာရှိသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
အနိမ့်ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ် + ပိုမိုမြင့်မားပြန်လာ = အဆင့်မြင့်အသားတင်ဖောက်သည်များသို့ပြန်သွားသည်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အကောင့်ကိုတတိယပါတီအတည်ပြုခြင်းဖြင့်ခွင့်ပြုနိုင်သည် (TD Ameritrade သည်၎င်းတို့၏ထိန်းသိမ်းသူဖောက်သည်များအားအွန်လိုင်း ၂၄/၇ အကောင့်ကိုပြည့်စုံစွာကမ်းလှမ်းနိုင်သည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအလေးထားပြီးနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုသည်
Durig ၏ Dow Portfolio ၏ခွေးများနှင့်စတင်ခြင်း
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၂၅ ကျပ်
TD Ameritrade Institutional မှာထိန်းသိမ်းထား
တစ် ဦး မိတ်ဆက်စကားစမြည်ဖြင့်စတင်ပါ
တစ် ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးလိုသောစီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတူညီချက်ပြန်လည်သုံးသပ် / ပြန်လာပါ
The Dow ၏ Dogs - DogsDow.com
Dividends နှင့်အတူအပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ
S&P 500 - DogsSP500.com
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရလိုပါက Durig's အဆိုပါ Dow အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ၏ခွေးများ, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး Durig Capital ကို (971) 327-8847 မှာ, သို့မဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@durig.com.
Dow of the Dogs နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ လွတ်လပ်သောဘဏ္Financialာရေးသတင်းများ၊ စျေးကွက်သုတေသနနှင့်ပိုမိုသောအရာများရရှိရန်စာရင်းသွင်းပါ။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: အတိတ်ကစွမ်းဆောင်ရည်များသည်အနာဂတ်အောင်မြင်မှုအတွက်အရိပ်အယောင်မရှိပါ။ ပြသထားသည့်မည်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်မဆိုဤထုတ်ဝေမှုသည် 7-31-2019 ၏ဖြစ်သည်။ * အဓိကအသုံးပြုသောအခြေခံစံနှုန်းမှာ SPDR Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ETF ဖြစ်သည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်တစ် ဦး ထံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံသင့်သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာ အပြာရောင် Chip စတော့ရှယ်ယာ အပြာရောင်ချစ်ပ် အများပိုင်သတင်း csco cvx အမျိုးမျိုး ခွဲဝေ ခွဲဝေမှုအထွက်နှုန်း ခွဲဝေအထွက်နှုန်း Dividends đi DJIA ခွေး အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ dow Dow Jones Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှ ရေ Durig Capital ကို ရှယ်ယာ မြင့်မားသောမြတ်များအထွက်နှုန်း မြင့်မားသော Dividend အထွက်နှုန်း မြင့်မားသည် မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း မြင့်မားအထွက်နှုန်းထိတ် IBM က ဝင်ငွေနည်းဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသုတေသန ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ jnj ဇူလိုင်လ တစ်သက်တာ မိုက်ကယ် B Higgins mrk Nasdaq NYSE ပိုကောင်းအောင် ပိုကောင်းပါတယ် pfe pg အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ ပြန်လာ စတော့ရှယ်ယာ စတော့ဈေးကွက် စတော့ရှယ်ယာ vz xom
Durig Capital သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အထူးပွင့်လင်းမြင်သာသောဘဏ္fidာရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ယခုအခါ Dow ၏ Dogs ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်အနည်းငယ်ကွဲပြားသော၊ အထူးပြုလုပ်ထားသောချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ Dow မဟာဗျူဟာ၏ကောင်းမွန်သောတည်ဆောက်ထားသည့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းကိုဖန်တီးလိုက်သည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ မင်္ဂလာပါ သို့မဟုတ် (971) 732-5119 ခေါ်ဆိုပါ။
Sarkari Jobs သည်အိန္ဒိယရှိအမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ
ယခင်ကမြွေရေနံအရောင်းဝန်ထမ်းသည်ပြန်လည်ပတ်လာသည် - အင်တာနက်ကအပြစ်တင်စရာရှိသလား။